7 data kaadị mgbake VS Wondershare Data Recovery
Nke dị mma 7 data kaadị mgbake VS Wondershare Data Recovery.
7 data kaadị mgbake
Mere maka ụdị ọ bụla nke mgbake nke 7 data kaadị mgbake bụ otu n'ime ndị mmemme na-n'efu n'elu internet na mgbe ọ na-abịa onwe arụmọrụ na irè-apụ nke window. N'ụzọ dị otú a 7 data kaadị mgbake ezie na a na-eji nke ọtụtụ iri puku ndị mmadụ tumadi n'ihi na ọ bụ free nke na-emezughị t ndị a chọrọ results n'ihi na onye ọrụ na nke a. Ọ bụ otu n'ime ndị na omume na mgbe mgbe ugbu 100% results ka ọrụ na ọ bụ ihe niile n'ihi na eziokwu na ndị na-adịghị ike na-mgbake na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ bụ ya mere chọrọ site ọrụ na nke kacha mma na ihe ndị kasị uchu omume na nke a na-echefu ochie gaferela na outlandish na-adịghị ike na-ejere nzube ugbu a n'ihi na ngwa ngwa ọganihu na nkà na ụzụ. 7 data kaadị mgbake bụ ọ bụ ezie na-arụ ọrụ na-eme ka n'aka na ndị n'ime ahịa na-ụda ihe ọmụma nke ngwaahịa ma nke bụ eziokwu nke okwu ahụ bụ na ha na-anya n'ebe-eru ahịa afọ ojuju larịị nke a na-atụ anya na nke a. 7 data kaadị mgbake na aka nke ọzọ na-nwere ike ahịa isi ma dị mwute ikwu Ndị ahịa a bụ ndị na-na-enwe ike naghachi obere chunks nke data na mgbe ọ na-abịa nnukwu faịlụ ma ọ bụ nnukwu data mgbake mgbe ahụ ọ na-gwara ghara eji nke a usoro .
N'aka nke ọzọ Wondershare Data mgbake abịa na a free ikpe oge ahụ bụ ndị mbụ na ndị mbụ uru nke na-eji ngwaahịa dị ka ọ na-eme n'aka na mkpebi ikpeazụ nke ndị ahịa na-mezuo na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na Wondershare Data mgbake na nke a na-emekwa ka n'aka na nsonaazụ kacha mma na-nyere ka onye ọrụ nke mere na ha na-enwe ike iji na-enweta data mweghachi 100% ma ọ bụ ọbụna nso a. Ihe omume ahụ bụ maa bụghị free ma ya abịa na ndụ mmelite otu ugboro obere ego na-nyekwara na steeti a nke nkà usoro. Mmepe nke Wondershare Data mgbake-emekwa ka n'aka na ọhụrụ faịlụ ndị ọnọdụ na-kwukwara na n'adịghị 7 data mgbake Wondershare Data mgbake-akwado ihe 550+ formats na ike-natara na weghachiri eweghachi na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ bụ ya mere ihe omume ahụ bụ uru ịzụta ma onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara na nke a mgbe ọ na-abịa data mgbake dị ka usoro ihe omume e wuru iji na-enweta kacha ahịa afọ ojuju. Site na obere ka nnukwu faịlụ mgbake Wondershare Data mgbake mere ka n'aka na ihe kasị mma ọrụ na-anapụta ndị ahịa nke mere na ọ bụrụ na e a oge ọzọ mgbe ahụ, a atumatu na-kasịnụ oke nke onye ọrụ nke na-maa mgbe gbanwere na nke a.
Metrics na aha
Mfe iji na ọ dịghị mmezi chọrọ
All nchekwa ngwaọrụ na ụdị na-akwado
Niile isi na-ahụkarị ọnọdụ akwado
550+ faịlụ ụdị akwado
Niile ngwaọrụ akwado
Mara mma interface na n'efu
Limited nchekwa na ngwaọrụ nkwado
Ụkọ ndapụta-ezubere iche
Limited faịlụ na ụdị kwukwara na bụ banyere 100 max nke 250
Naghachi ị data si a kaadị nchekwa na Wondershare Data Recovery
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà ngwá ọrụ na a pụrụ iji jide n'aka na data na-natara na ihe kasị mma n'ụzọ na-emecha onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na nke a. Ọ bụ-ahụ kwuru na ọ omume a haziri iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge ma na-ọkọkpọhi kasị mma pụta. The interface nke usoro ihe omume bụ kwa mfe iji na ọbụna a novice onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na nsonaazụ kacha mma na-enwetara na nke a. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma ọ na-gwara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe usoro na e kwuru n'okpuru isollowed mere na onye ọrụ bụghị nanị ọkọkpọhi kasị mma n'ihi ma na-emekwa ka n'aka na ọkaibe arụmọrụ nke ihe omume a na-agba àmà ya iji jide n'aka na onye ọrụ na-aghọ a na-adịgide adịgide so nke obodo enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge:
1. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html na-ịchọgharịrị mere na usoro ihe omume ebudatara, arụnyere na ulo oru:
2. The faịlụ ụdị a na-ahụ ọzọ ga-ahọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe usoro triggering na nke a:
3. The faịlụ ọnọdụ bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem iji jide n'aka na ezubere iche search a mụụrụ na oge nke onye ọrụ tinyere usoro ego a na-echekwa na-a oké ịgbatị:
4. Ozugbo faịlụ e natara onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-achọrọ-natara na-amịpụtara site uhuruchi ha na mgbe ahụ naghachi button na-enwe na nke a. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ na-enyocha faịlụ anya nke mere na needful nwere ike mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
Buru ọkacha mmasị gị data mgbake software
Dabere na table na analysis na e mere na nke a ọ na-ike n'enweghị ahuta na Wondershare Data Recovery bụ ihe kasị mma nhọrọ na onye ọrụ ga-aga n'ihi na-eme ka n'aka na data mgbake na-mere n'ihi na n'aka. The free ngwá ọrụ mgbe a pụrụ ịdabere na otú 7 data kaadị mgbake na mgbe na-atụ aro na otu ihe ahụ mere ọ bụkwa na-ahụ kwuru na software bụ nnọọ ike iji na ka tụnyere Wondershare Data Recovery ọ bụ zilch na okwu nke arụmọrụ na faịlụ mmịpụta.
> Resource> Naghachi> nke dị mma - 7 data kaadị mgbake VS Wondershare Data Recovery